विशेष समाचार | newdnn.com
रुपन्देही २ फाल्गुन । बुटवलको संगमपथस्थित युनाइटेड प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालिको गोदाममा आगलागी हुँदा २ करोडको क्षति भएको छ । आगलागी हुदा गोदाममा भण्डार गरिएको प्लास्टिकका सामान जलेर नस्ट भएको प्रहरीले बताएको छ । आगो निभाउन भैरहवा सिद्धार्थनगर, परासी, रामग्राम र कपिलवस्तुको वाणगंगाबाट गरी चार वटा दमकल झिकाइएको सन्चालक जीवन गौतमले बताए ।
काठमाडौं, १९ माघ । आइसिसीले केन्याविरुद्ध ५ विकेट लिएका सन्दीप लामिछानेलाई उत्कृष्ट लेग स्निपर बलर भनेर प्रसंशा गरेको छ । विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु मा सन्दीपले केन्याका ५ विकेट लिएपछि नेपाल र उनको प्रशंसा गरेको हो । आइपिएलमा दिल्ली डेभर डेभिल्संर्सग आबद्ध सन्दीपलाई एक विश्व उत्कृष्ट बलर हुन सक्ने सम्भावना भएको क्रिकेटर भनेको छ । सन्दीपकै उत्कृष्ट बलिङमा नेपालले केन्यालाई…
काठमाडौं,२८ माघ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको छ ।निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आइतबार बिहान ११ बजे राष्ट्रपति भवन सितल निवासमा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम बुझाएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । बुधबार ५६ सदस्यका लागि भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम बिहीबार सार्वजनिक गरिएको…
महिला हिंसाको अचाक्ली रुप : खुकुरी हानेर श्रीमतिको हत्या
उर्लाबारी, मोरङ, २८ माघ । मोरङको पथरीशनिश्चरेमा गए राति श्रीमान्ले खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । पथरीशनिश्चरे–९ स्थित श्याम चौक बस्ने ३४ वर्षीय चन्द्रबहादुर लिम्बूले ३० वर्षीया श्रीमती तुलसा लिम्बूलाई खुकुरीले घाँटीमा प्रहार गरी हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रहरी निरीक्षक विजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । घटनापछि खुकुरी प्रहार गर्ने लिम्बू फरार रहेकाले उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले…
कर्मचारीमाथि लगाम लाग्यो : स्थानीय तहमा नगए तलब नै नपाउने !
बागलुङ, २८ माघ । स्थानीय तहमा नपुगी जिल्लामै बसेर काम गरेका आधारमा कर्मचारीले तलब नपाउने भएका छन् । स्थानीय तह गठन भएको महिनौँ बित्दा पनि कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नगएपछि यस्तो निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । समिति, दश वटै स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयका प्रमुख बीचको बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्मचारीको हाजिरी स्थानीय तहका…
राष्ट्रपति सँग दाहालको भेटवार्ता समसामयिक विषयमा छलफल
काठमाडौं,२६ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन ६ गते नयाँ सरकार गठन हुने बताएका छन् । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन आयोगले फागुन ५ गतेभित्रै निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तयारी गरिरहेकाले पनि ६ गते नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहेको प्रष्ट पारे…
कपिलवस्तुमा आठसय ७८ जनामा हात्तीपाइले, बालबालिका उच्च जोखिममा
कपिलवस्तु, २६ माघ । कपिलवस्तुको जितपुरमा ८ सय ७८ जनामा हात्तीपाइलेको लक्षण देखा परेको छ । आव २०७३÷०७४ को तथ्यांकका आधारमा जिल्लामा खुट्टा सुन्निएका २२८, हाइड्रोशील ६०२ र शरीरका अन्य भागमा ४८ गरी ८७८ संक्रमित भेटिएका हुन् । सन् २०२० भित्र हात्तीपाइले रोगीको संख्या एक प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने सरकारी योजनाअनुसार जिल्लामा विसं २०६४ देखि २०६६ सम्म अभियान सञ्चालन गरिदै आइएको छ…
काठमाडौँ २५ माघ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा बैठक शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने उल्लेख छ । सभापति देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा पार्टीबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिटमा क–कसलाई पठाउने भन्नेबारे छलफल हुने भएको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ४० सिट जितेको छ…
कोरला नाका खुलाउन तीव्रताका साथ कूटनीतिक पहल सुरु
मुस्ताङ, २५ माघ । कोरला नाका सञ्चालनका लागि चीन र नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै कूटनीतिक पहल सुरु भएको छ । कोरला नाका सञ्चालनका लागि पहुँच मार्ग निर्माणसँगै सुरक्षा निकायको क्याम्प खडा गर्ने तयारी पनि भएको छ ।सन् २०१७ अक्टोबरमा चिनियाँ राजदूत यु हाङले औपचारिक रुपमा कोरला नाकाको भ्रमण गरेका थिए । मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले…
राजपाले आलोपालो सरकार चलाउने भनेपछि फोरमसँगगको वार्ता निष्कर्षविहिन
जनकपुरधाम, २४ माघ । प्रदेश नं २ को सरकार निर्माणका लागि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेताबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । दुवै दलकका शीर्ष नेताबीच जनकपुरधामको सीताशरण होटलमा बिहान नौ बजेदेखि थालिएको वार्ता साँझसम्म पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । दुवै दलबीच सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालय बाँडफाँडलगायत विषयमा सहमति हुन नसकेका कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको…
जिल्ला हाकेका गणेश राई : व्यावसायिक चिया खेतीबाट १३ जनालाई रोजगारी !
भोजपुर, २३ माघ । काम गर्दा सानो होइन्छ या ठूला मान्छेले काम गर्दा लाज हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेको नेपाली समाजमा एक पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदाहरणीय बनेका छन् । सिडिओ भएर विभिन्न जिल्लामा काम गरेका र अहिले अवकाश प्राप्त भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको होम्तोकका गणेश राईले सहकारी संस्थामार्फत एक हजार रोपनी जग्गामा व्यावसायिक चिया खेती विस्तार गर्न थालेका छन् ।…
सामुदायिक विद्यालयको अर्को समस्या : दरबन्दीअनुसार शिक्षक छैनन्
राजविराज, २३ माघ । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका–१ भारदहस्थित बिपी माविमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको छ । करिब २५ वर्ष अगाडि स्थापना भएको सो विद्यालयमा शिक्षकको अभावका कारण विद्यालयमा पठनपाठन गर्न समस्या हुने गरेको शिक्षकले गुनासो गरेका छन् । विसं २०४९ मा स्थापना भएको उक्त विद्यालयमा अन्य सामुदायिक विद्यालय तथा नीजि बोर्डिङ स्कुलभन्दा बढी विद्यार्थीको चाप यस विद्यालयमा…
फोरमका अध्यक्ष यादव भन्छन् – ‘जातीय विभेद र घृणाले मधेसको विकास हुन सक्दैन’
राजविराज, २२ माघ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका छन्, जातीय विभेद र घृणाले देशको विकास हुदैन् । खासगरी मधेसमा जातीय विभेद र घृणाको राजनीति फस्टाएको भन्दै यसको अन्त्यका लागि लड्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । सोमबार रुपनी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोहमा उनले भने “जातीय विभेद र घृणाले मधेसको विकास हुन सक्दैन्, त्यसैले जातीय सद्भाव र सहिष्णुता…
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा राउतको चर्चा, फोरमले छान्यो संसदीय दलको नेता
धनुषा, २२ माघ । संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश नं २ मा संसदीय दलको नेतामा लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ । यससँगै राउतलाई प्रदेश नं २ को मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको छ । राउत पर्साका स्थानीय बासिन्दा तथा संघीय समाजवादी फोरमको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । उनी पर्साबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । फोरमले मुख्यमन्त्री पाए राउत नेपालकै अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै…
जनकपुर, सुर्खेत, बुटवल र धनगढीमा तामझाम, विरगञ्जमा बन्द र चक्काजाम !
पर्सा, २१ माघ । प्रदेश २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठक धनुषाको जनकपुरमा तामझामका साथ शू हुँदा पर्साको विरगञ्जमा भने बन्द र तोडफोड भएको छ । सरकारले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम तोकेदेखि नै आन्दोलित भएका विरगञ्जबासीले आज बन्द र तोडफोड गर्दै सरकारको निर्णयमा असहमति जनाएका हुन् । उनीहरुले शुरुदेखि नै विरगञ्ज राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । वीरगञ्ज प्रादेशिक…